Maraakiibta oo La Hubeeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
En liten attack-båtsänks ner från HMS Carlskrona i en piratjaktsövning. Foto: Tim Freccia/Scanpix.
Maraakiibta oo La Hubeeyey
Publicerat fredag 28 januari 2011 kl 13.23
Shirkadda maraakiibta ee Stena Bulk ayaa go'aansatay iney dhowaantan inay maraakiibteeda xamuulka hubeeyso, si looga hor-tago burcad-badeedda gacanka cadmeed iyo xeebaha bad-weeynta Hindiya.
- Waa xaalad ku saabsan burcad-badeedda ka hoowl-gasha gacanka cadmeed iyo bad-weeynta Hindiya.
Ka gaban meeyno burcad-badeedda, qoowleeysatada iyo wixii la hal-maala, sida uu u sheegay wargeeyska Dagens Industri agaasimaha shirkadda Ulf Ryder.
Go'aankan ayaa ka dambeeyay kor u kaca falalka burcad-badeednimo. Burcad-badeedda ka qoowleeysata gacanka cadmeed iyo bad-weynta Hindiya ayay gacanta ugu jiraan maraakiib dhan 30 iyo 700 ka mid ah shaqaalihii maraakiibta.
- Illa iyo hadda sida uu sheegay Ulf Ryder, in weerar loo geeystay laba markab ee ka mid ah maraakiibta shirkadda, kuwaasina oo labadii marba ey ka caabiyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidanka mariineeska Ruushka, kaga sugan carrigaa.
Ryder ayaa sheegay inuu ka xun yahay bulshada caalamka ee aan sidii loo baahnaa gacan uga geeysan bucad-badeedda carrigaa ka hoowl-gasha, isagoona intaa ku daray iney carrigaa isaga gooshaan sannadkii markiib gaarsiisan 40 000.
- Ryder ayaa xaaladan u bar ar dhigay haddii lagu hayn lahaa 700 oo ruux garoon diyaaradeed shan bilood iyada oo aan milateri ama ciidan ammaan aannu gacan middaa ka geeysan sidii loo soo furan lahaa.
- Waa falal khatar ku ah wadammada horey warshadaha ugu maray, haddii gacankaasi xirmo. Waana mid laga naxo in aaney hayadda Qarammada Midoobay iyo ururka Naato uga hoowl-gelin sidii looga baahnaa. Dalka Iswiidhen wuxuu dhaqaale geliyaa dalka Afgaanistaan, hase yeeshee dawladdu uma aaney taageero-bixin sidii ey ku difaaci lahayd maraakiibtayada, sida uu Ryder u sheegay war-geeyska Dagens Industri ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano DI.
Shirkadda Stena Bulk ee uu madaxda ka yahay Ryder ayaa go'aansatay in maraakiibtooda la raaciyo saraakiil ama waardiyeyaal hubeeysan, si loohgo hor-tago burcad-badeedda weerarrada ku haysa maraakiibta isaga guusha carrigaa. Mar uu middaa ka warramayayna waxaa uu sheegay.
- Go'aankaa waa mid aannu gaarnay. Inta aannu ka war-qabnana ciddii nagaga horreeysay guul ayey middaa ka gaareen iyaga oo ka ammaan helay weerraradii burcad-badeedda. Waana midda aannu ku talo jirno in bulsho iyo shirkado nabadeed helaan ammaan, ka badbaada weerarro.
Sannadkii ina dhaafay ee 2010 ayaa weerar burcad-badeednimo lagu qaaday gacanka cadmeed iyo bad-weynta Hindiya maraakiib gaarsiisan 445 markab, iyadoona ey u suurta-gashay burcad-badeeddu iney gacanta ku dhigaan 53 maraakiib. Halka ey ka heleen dhaqaale madax-furasho ee gaarsiisan 1,5 milyaard ee koronka iswiidhishka, sida ay sheegtay hayadda mareeykanka One Earth Future.
Maxkamad La Saaro Burcadbadeedda
Sidoo kale daraasad ay sameeysay hayadda Qaramada Midoobay waxay ku talisay in la kordhiyo tallaabooyinka ka dhanka ah burcad badeedda Soomaalida, kuwaas oo dunida galiyay kharash lagu qiyaasay ilaa todoba milyaard ee doolarka Maraykanka sannadkii, iyadoona hayaddu sidoo kale soo jeedisay in la abuuro maxkamad caalamiya ee lagu soo taago dadyoowga falalkaa ku kaca.
Baaritaankan oo uu soo diyaariyay wasiir horay uga tirsanaa golihii dawladda ee Faransiiska, Jack Lang ayaa isniintii lagu sheegay in burcad-badeedu dardar-geliyeen qafaalashada maraakiibta ee mar walba ka sii dheeraaneeysay xuduudaha xeebaha iyo hub ka casriyeeysan kii ey hore u haysteen.
Weerarrada burcad-badeedda ayaa saabay iney kor u kacaan xoogagga ciidammada mariineeska ee xeebahaa ka hoowl-gala, hoos-u-dhac dhaqaale ee la soo gudboonaada maraakiibta xamuulka, dhaqaalaha madax-furasho oo kor u kaca iyo dhaqaalaha ku baxa ceeymiska oo zaa'iday.
Waxaa ay muujinaysaa in aasaasidda maxkamad ku dhisan sharciga Soomaaliya balse dal dibedda ah ku taalla in la sameeyo.
Iminkadan ayaa lagu hayaa 13 dal e eka mid ah waddammada caalamka burcad-badeed gaareeysa 780, halka kuwa ey gacanta ku dhigaan ciidammada mariineeska ee xeebahaa ka hoowl-galaa tobankiiba sagaal sii daayaan, halka uu Lang soo ban-dhigay in loo baahan sidii ey waddammada caalamku shuruucdooda wax uga bedeli lahaayeen sidii maxkamad loogu hor-keeni lahaa dalalkaa, iyo in sidoo kale la abuuro maxkamad caalamiya ah ee burcad-badeedda lagu soo taago si xeerka loo hor keeno. Iyadoona sida ku cad ilo laga soo xigtay hayadda qaramada Midoowday uu dalka Tanzaaniya sheegay inuu diyaar u yahay sidii amuurtaa looga fulin lahaa dalkaa.
Laga soo bilaabo sannadkii 2008 ayey burcad-badeedda soomaalidu qafaasheen ku dhowaad 2 000 oo bad-maax. Haka sannadkii ina dhaafay ey gacanta ugu jireen 612 badmaax iyo maraakiib gaareeysa 26.
Sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in gacan laga siiyo gobollada Puntland iyo Somaliland sidii ey gacan uga geeysan lahaayeen soo jiidashada dhallinyarada ee burcad-badeedda xiiseeya.